Semalt Islamabad Expert manazava ny tokony hataonao amin'ny spam-referendra ao amin'ny Google Analytics
Ho an'ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala, ny fifamoivoizana momba ny spam dia olana lehibe amin'ny fiatrehana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ao amin'ny Google Analytics, misy tarehimarika momba ny fifamoivoizana mety hiseho nefa tsy miseho amin'ny tontolon'ny tranokala. Amin'ireo tranga ireo dia misy ny vintana avo lenta fa tsy avy amin'ireo mpitsidika olombelona akory ny fitsidihana aterineto fa solosaina "zombie". Ny fifamoivoizana amin'ny bot sy ny botnets dia mampihena ny fahamarinan'ny teknolojika ara-barotra tahaka ny SEO sy ny marketing (content).
Sohail Sadiq, manam-pahaizana matihanina avy amin'ny Semalt , dia manome lohahevitra sasantsasany azo ampiharina ho anao.
Bots sy fitsidihana aterineto
Amin'ny sasany amin'ireo tranga etsy ambony, dia mety hisy fotoana ahafahan'ny tranonkala vaovao manomboka mahazo fitohanan'ny fifamoivoizana avy amin'ny sehatra iraisana. Amin'ireny tranga ireny, aza mankalaza ny fandresena satria mety ho avy amin'ny tetikasa botnet lehibe. Ny 50% n'ny tontolon'ny tranonkala manerantany dia avy amin'ny bots. Tena ilaina ny botsika hampiasaina amin'ny tranonkala sasany ho an'ny tanjona fototra. Ny Bots ihany koa dia manampy tranonkala finday sy tranonkalan-tranonkala hafa izay natao ho an'ny teknika fanavaozana toy ny marketing ao amin'ny content .
Tsy ny mpilalao rehetra dia ratsy. Ohatra, ireo tranonkala toy ny PayPal sy Google dia miankina amin'ny botso mba hamoahana ny lafiny sasany amin'ny asany.
Ny fampiasana botsotra dia manampy ireo mpamorona vohikala hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa maro amin'ny fampiasana azy ireo.
Indraindray, mampiasa botsa ny olona hanatanterahana fanafihana amin'ny aterineto amin'ny endrika samihafa amin'ny tranokala. Izy ireo dia mamitaka ny rafitra fikarohana mba hanakanana ny tompon'ny tranonkala amin'ny isan'ireo mpitsidika tonga ao amin'ilay tranonkala. Ireo spam referrer dia mety ho tonga amin'ny fomba samihafa. Ny sasany amin'ireo endrika isan-karazany izay misy ny spam dia miseho ato amin'ity lahatsoratra ity.
Raha ny filazan'ny spam referrer, dia ilaina ny mampiditra ny karazana fitsangatsanganana ao amin'ny teny manodidina. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ity karazana spam ity dia tonga amin'ny fomba roa:
Mety manova ny fitsidihana aterineto amin'ny tranonkalanao izany, saingy mety tsy hitodika amin'ny tontolon'ny tranokala. Ankoatra izany, misy fiantraikany amin'ny metrika Google Analytics, sehatra iray izay mety hanelingelina ny tetikady ara-barotra amin'ny aterineto.
Ity karazana spam ity dia mety hahitana ny fitsidihana aterineto izay mety tsy hitovitovy amin'ny tarehintsikao fantaro ao amin'ny tranonkala. Amin'ity tranga ity dia manandrana mampifoka ny fampisehoana Google Analytics ny tranonkalan'ny fitsidihana tranonkala sandoka.
Ireo teknikan'ny spam referrer dia mampiasa botnets mba hamerenana ny fiverenan'ny tranokala miverimberina amin'ny seriver mampiasa an'io tranonkala manokana io. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo olona ao ambadik'ireo fanafihana ratsy dia mikasa hampitombo ny habaka amin'ny serasera amin'ny ankamaroan'ny pejy. Amin'ny toe-javatra hafa dia miezaka ny hamoaka vola amin'ny fampiharana ireo fanafihana ireo ny olona.
Ny spam referrer dia olana goavana iray izay afaka mamela ny GA anao amin'ny fomba maro. Ohatra, ny fampitomboana ny fifamoivoizana avy amin'ny bots amin'ny referral dia mampihena ny fahamarinan'ny tahirin-kevitrao sy ny kalitaon'ny fifamoivoizanao. Ny fotoana sy ny tahan'ny faharetan'ny tranonkala dia lasa ambany. Zava-dehibe ny manala ny spam referral mba hampitombo ny fotoana andefitry ny tranokalanao Source .